မျှဝေရန်မလုံလောက်ပါ - ဘာကြောင့်အကြောင်းအရာများကိုပိုမိုချဲ့ထွင်ရန်နည်းဗျူဟာလိုအပ်သည် Martech Zone
အကယ်၍ သင်ကဆောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့လာလိမ့်မယ်။ သို့သော်အင်တာနက်သည်အကြောင်းအရာများနှင့်ဆူညံသံများစွာနှင့်အလွန်အမင်းပြည့်နှက်နေခြင်းမဖြစ်မှီတွင်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာဟာအရင်တုန်းကအတိုင်းမသွားဘူးလို့သင်စိတ်ပျက်မိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကသင့်အမှားမဟုတ်ပါဘူး။ အခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားပြီ
လူတိုင်းနှင့်၎င်းတို့၏ခွေးစာသားနှင့်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်သိတယ် အမြင်အာရုံအကြောင်းအရာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၌တည်ရှိ၏ သင့်ရဲ့စာကိုပရိသတ်ကိုသယ်ဆောင်ပေးတဲ့အဓိကအချက်ပဲ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖန်တီးပေးပြီးလူတွေကိုလှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ရှားစေတဲ့စကားလုံးများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများ။ ထိုအခါလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူပြောင်းလဲမှု, မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အမြင့်ဆုံးချမ်းသာ။
သင်၏ပရိသတ်ရှေ့တွင်ချန်လှပ်ထားသည့်ဘလော့ဂ်များ၊ Instagram ပုံပြင်များ၊ သတင်းလွှာများ၊ ဗွီဒီယိုများစသည်တို့မည်သို့ပင်ရှိပါစေသင်ထွက်ခွာသွားသမျှသည်၎င်းတို့အားစိတ် ၀ င်စားစေရန်နှင့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထိတွေ့ရန်ကူညီသည်။ ၎င်းသည်သင်၏စီးပွားရေးကိုပိုမိုအာရုံစူးစိုက်စေပြီးတစ်သမတ်တည်းကူညီပေးသည် သင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုဘလော့ဂါတစ်ယောက်အဖြစ်တိုးချဲ့ပါ.
ဒါကြောင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးတာကကောင်းတယ်၊ မတူကွဲပြားတဲ့ပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာထုတ်ဝေတာကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ကလူအများစုအထိရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုချဲ့ဖို့လိုတယ်။
Paid ကြော်ငြာများ - သင်၏ကြော်ငြာများကိုတာရှည်ခံသောမမြင်ရသောအတောင်များအဖြစ်ကြော်ငြာများကိုစဉ်းစားပါ။ ပလက်ဖောင်းအများစုသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ဖြစ်လာသည် ကစားရန်ပေးသည် အထူးသဖြင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်။ ဒီမှာဘာမှမမှားဘူး၊ သင်ဒေါ်လာ ၁ ကိုသွင်းပြီးဒေါ်လာ ၂ ပြန်ရလျှင်သင်ကစားလိုမည်မဟုတ်လော။ ကြော်ငြာများအတွက်ငွေပေးချေခြင်းသည်သင်၏လက်ရှိပရိသတ်ရှေ့တွင်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုတွန်းအားပေးရန်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုထက် ကျော်လွန်၍ ပရိသတ်အသစ်များနှင့်သင်၏လက်လှမ်းမီမှုကိုတိုးချဲ့ရန်သည်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သည်။
အခြားအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်သြဇာညောင်းပါ - ဤနေရာတွင်ရည်မှန်းချက်မှာသက်တူရွယ်တူများနှင့်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးနှင့်ကောင်းမွန်သောစိတ်ဆန္ဒကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအကြောင်းအရာအချို့ကိုမျှဝေခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သမျှအခါအားလျော်စွာအမှတ်အသားပြုခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်သင့်အားသူတို့၏ရေဒါများပေါ်တွင်တင်ပြီးအချိန်တန်သောအခါအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။
အတွက် chime မှသြဇာကိုမေးပါ - သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောပရိသတ်ကိုထိတွေ့ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာအချို့အကြောင်းအရာများအပေါ်၎င်းတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ post ည့်သည်စာမူကိုသူတို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ထုတ်ဝေရန်သို့မဟုတ်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုပရိသတ်များနှင့်မျှဝေရန်ပင်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ကြိုးစားမည့်အစား၎င်းတို့ကိုသင်၏နယ်ပယ်ရှိခေါင်းစဉ်တစ်ခုအပေါ်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုမေးရန်အီးမေးလ်ပို့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏အဆုံးတွင်အချိန်အနည်းငယ်သာယူမည်ဖြစ်ပြီးသင့်ပရိသတ်များနှင့်သင်၏အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်ဝေမျှနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဟာခင်မင်ရင်းနှီးမှုရှိစေဖို့နဲ့ကောင်းသောဆန္ဒကိုမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ သင်၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ခံစားမှုကိုခြုံငုံ။ လက်တွေ့မကျစေရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနည်းလမ်းကိုသုံးရန်ရိုးရှင်းစွာကြိုးစားပါ။
ထိုသုံးပါ မိုးမျှော်တိုက် နည်းစနစ်! အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်ဤသည်သည်လက်ရှိတန်ဖိုးရှိသောအကြောင်းအရာများအပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အမှန်ကတော့, သင်သည်တိကျတဲ့ခေါင်းစဉ်အပေါ်အကြီးအကျယ်သုတေသနပြု, တတ်နိုင်သမျှဒေတာစုဆောင်းပြီးတော့သင်ခေါင်းစဉ်အပေါ်သင့်ကိုယ်ပိုင်လှည့်ကွက်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်စကားပြောဆိုမှုတစ်ခုလုံးမှသင်၏ထူးခြားသောရှုထောင့်မျှဝေပါ။ သင်ပြီးပါကအကြောင်းအရာကိုသင်၏အလုပ်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြားအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများထံပေးပို့ပြီးသူတို့၏တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပရိသတ်များနှင့်မျှဝေပါ။
သင့်ရဲ့ content တွေကို repurpose - သင်၏ကွန်ရက်ပေါ်တွင်တန်ဖိုးရှိသောဘလော့ဂ်တင်ပို့ချက်အများအပြားရှိနေပါသလား။ သင်၏အကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာများကို အသုံးပြု၍ အမြဲစိမ်းလမ်းညွှန်တစ်ခုအတူတကွထားခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုအသစ်တစ်ခုစတင်ပါ။ ထို့နောက်၎င်းကို ဦး ဆောင်သည့်မျိုးဆက်သံလိုက်အဖြစ်အပိုအာရုံစိုက်မှုနှင့်အမှတ်တံဆိပ်သိရှိမှုတို့အတွက်အသုံးပြုပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားအချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုယူဆောင်လာသည့်လက်ရှိအကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်ပေးပြီးပရိသတ်အသစ်များကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
တူကိရိယာများကို သုံး၍ ဗွီဒီယိုတိုတစ်ခုဖန်တီးခြင်း Lumen5 or လျှပ်တစ်ပြက် အမြန်အကြံပေးချက်များကိုမျှဝေဖို့
သင်၏ဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာမှအသံကိုယူပြီး podcast အဖြစ်ပြောင်းလဲပါ
နောက်ဆုံးတွင်သင်၏အကြောင်းအရာကိုဖန်တီးရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက်မဟာဗျူဟာကျသင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဗျူဟာကျစွာစဉ်းစားပြီးအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာများကိုလိုအပ်သောသူများရှေ့တွင်တွန်းရမည်။ ဒီမှာသော့ဖြစ်ပါတယ် ဆီလျော်မှု.
အလွန်အမင်းတန်ဖိုးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးပြီးပရိသတ်ကိုမှားယွင်းစွာဖြိုခွဲခြင်းထက်ဘာမျှဝမ်းနည်းစရာမရှိပါ။ ဒီချဉ်းကပ်မှုကသင်၏တစ်ခုလုံးကိုအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုနှင့် amplification မဟာဗျူဟာ ဦး ဆောင်လမ်းပြကြပါစို့။
ပရိသတ်ရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုသင်နက်နက်နဲနဲနားလည်အောင်သေချာစေပြီးသင့်ဖြေရှင်းချက်ကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေပါ။ ပြီးရင်ပစ်မှတ်ထားတဲ့ပရိသတ်ဘယ်သွားသွားအာရုံစိုက်ပါ။ ထို့နောက်သင်၏စီးပွားရေးပန်းတိုင်များ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့်လည်းကိုက်ညီသောသက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများကို သုံး၍ ထိုပလက်ဖောင်းများသို့ထိုးသွင်းပါ
သင်၏လက်ရှိအကြောင်းအရာများကိုမည်သို့မြှင့်တင်ပြီးမြှင့်တင်နေသနည်း။ ဒီ amplification နည်းစနစ်ထဲကဘယ်ဟာကိုအရင်စမ်းချင်ပါသလဲ။ သင့်ထင်မြင်ချက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
Tags: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအကြောင်းအရာ amplificationအကြောင်းအရာ repurposeသြဇာလွှမ်းမိုးမှုပေးဆောင်ကြော်ငြာကစားရန်ပေးသည်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းအကြောင်းအရာ repurposeမိုးမျှော်တိုက် technique ကို
Sarah Williams သည်ဘာလင်အခြေစိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးတွင်အထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ သူမအကြိုက်ဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ် start up ကိုစစ်ဆေးပါ။ Wingman မဂ္ဂဇင်း - အမျိုးသားများအတွက်အွန်လိုင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့မဂ္ဂဇင်း။